Abaalmarinta Adeegga Tabaruca ee Madaxweynaha | Tonka Adeegaa
Muddada Abaalmarinta Minnetonka: Sebtember 1, 2020 - Ogosto 31, 2021
2021 Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: Sebtember 17, 2021
Hadafka laga leeyahay Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waa, qayb ahaan, in la hubiyo in ardayda oo dhami ay odorosaan oo ay raacaan hamigooda ugu sarreeya iyaga oo u adeegaya wanaagga ugu weyn. Aqoonsiga adeegan, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waa wakiil caddeyn u ah barnaamijka Abaalmarinta Adeegga Tabaruca ee Madaxweynaha Mareykanka (PVSA) , oo loogu talagalay in loogu mahadnaqo oo lagu sharfo dadka Mareykanka ah, kuwaas oo, sida ay u muujiyeen u heellan iyo tusaale ahaan, ku dhiirrigeliya kuwa kale inay u adeegaan.
Kartida waxqabadka (jilayaasha, muusikiistayaasha, koox-kooxeedyada): Bandhigyada badankood laguma xisaabiyo saacadaha adeegga abaalmarinta. Halka ay kooxuhu u sameynayaan dhacdo gaar ah bulshada nugul, ardayda waxay soo gudbin karaan saacadaha adeegga. Saacadaha waxqabadka waa inaysan ka badnaan 25% ee saacadaha ugu yar ee looga baahan yahay heerka abaalmarinta.
Meesha duruufo ka dheereeya ama ka reeban tilmaamahan ay ka dhici karaan, waa inaad soo bandhigtaa caqli gal macquul ah iyo caddeynta adeegga la siiyay dadka kale.
Ardayda, waalidiinta iyo tabaruceyaasha kale ee Degmadeena.
Hayso diiwaanka saacadahaaga adeegga laga bilaabo Sebtember 1 illaa Agoosto 31 ee sannadka abaalmarinta.
Ku soo gudbi saacadahaaga si elektaroonig ah adoo adeegsanaya arjiga PVSA ka hor waqtiga kama-dambaysta ah ee horraanta Sebtember. Iyada oo ku saleysan da'daada iyo saacadahaaga, waxaa jira afar abaalmarin oo la bixiyo:
Kooxda Da'da Naxaas Lacag Dahab
Carruurta (da'doodu tahay 5-10) 26-49 saacadood 50-74 saacadood 75+ saacadood
Dhallinyarada (da'doodu tahay 11-15) 50-74 saacadood 75-99 saacadood 100+ saacadood
Dadka qaangaarka ah ee da'da yar (da'da 16-25) 100-174 saacadood 175-249 saacadood 250+ saacadood
Dadka waaweyn (26 iyo ka weyn) 100-249 saacadood 250-499 saacadood 500 + saacadood
Qoysaska iyo Kooxaha
(Laba qof ama in ka badan oo xubin kastaa ka qayb qaadanayo ugu yaraan 25 saacadood wadarta guud) 200-499 saacadood 500-999 saacadood 1,000+ saacadood
Abaalmarinta Guusha Nolosha Madaxweynaha: Shakhsiyaadka dhammeeyey 4,000 ama saacado ka badan inta ay nool yihiin. Abaalmarinta Kasbashada Nolosha lama heli karo in lagu bixiyo waqtigan. Ka eeg www.presidentialserviceawards.gov wixii cusbooneysiin ah.
Meel kasta! Si aad u hesho fursado iskaa wax u qabso iyo fikradaha mashruuc ee beesheena fadlan booqo TonkaServes.org
Sida Loo Raadinayo:
Adeegso Xaashida Raadinta Google - Nuqul gaadhigaaga, ama u soo dejiso Excel, ama daabac.
Waxaa jira fiidiyowyo iyo tilmaamo ku dhex jira dalabka. Markaad saacadahaaga la socoto, bilow nidaamka dalabka.
Codsiyada waa elektiroonig 100%. Codsiyo waraaqo ah lama aqbali doono.
Si aad wax badan uga ogaato Abaalmarinta Adeegga Tabarucaadda Madaxweynaha (PVSA), booqo:
Su'aalaha ku saabsan habka abaalmarinta Minnetonka la xiriir: